चिन्नु भो, यी को हुन् ? « Ramailo छ
चिन्नु भो, यी को हुन् ?
अनमोल केसी स्टारर फिल्म ‘कृ’ को फस्ट लुक्स रिलिज भैसकेका छ । फस्ट लुक्स रिलिज पछि पनि अनमोलको कृ लुक्स सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ । यही क्रममा आइतबार साँझ अनमोलले आफ्नो नयाँ लुक्स सार्वजनिक गरेका छन् । अनमोलले सार्वजनिक गरेको उक्त तस्बिर विल्कुलै फरक छ । तस्बिरमा अनमोल केही डरलाग्दा र रहस्यमयी देखिन्छन् ।
भुवन केसी र सुवास गिरीको निर्माण रहेको फिल्म ‘कृ’ को हाल बन्दीपुरमा भैरहेको छ । बन्दीपुरपछि ‘कृ’ को सुटिङ धम्पुस र पोखरामा हुनेछ । सुरेन्द्र पौडेलको निर्देशन रहेको फिल्मलाई तिहारमा रिलिज गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अनमोलको अपोजिटमा नव नायिका अदिति बुढाथोकी प्रस्तुत भएकी छिन् ।